Izindwangu Zokushisa Ukukhipha Umshini Wokukhipha Umshini Wokushisa
Isigaba: Amakheyili Ukushisa Ukushisa Tags: lokungeniswa briling coil, izinhlamvu zokufakelwa, ukwenziwa kwamakhoyili wokungeniswa, ukufakwa kwe-coil yokushisa, ukufakwa kwezingxenye zokushisa, i-induction encibilikayo, amakhoyili wokufaka we-induction, umklamo we-inductor, inductors
Akunandaba ukuthi iyiphi ikhoyili yokungeniswa oyifunayo, singakusiza! Nawa ambalwa nje wamakhulu wemiklamo yamakhoyili esisebenze nawo. Ama-pancake coil, ama-helical coils, ama-concentrator coil… i-tubing eyisikwele, eyindilinga neyikunxande… I-single-turn, i-five-turn, i-0.10-turn… ngaphansi kwe-5 ″ ID kuya ku-ID engaphezu kwe-XNUMX ′… yokushisa kwangaphakathi noma kwangaphandle. Noma yini oyidingayo, sithumele imidwebo yakho nezincazelo zesilinganiso esisheshayo. Uma umusha ekufudumaleni kokungeniswa, sithumele izingxenye zakho zokuhlolwa kwamahhala.
Ngomqondo othile, umklamo wekhoyili wokushisa okufakelwayo ukhiwe phezu kwesitolo esikhulu semininingwane yokuhumusha okuthuthukiswa kwayo okuvela kumakhemikhali amaningi e-inductor elula njenge
coil solenoid. Ngenxa yalokhu, umklamo wekhoyili ngokuvamile usekelwe ekuhlangenwe nakho.
Lolu chungechunge lwezihloko luhlola izinto ezibalulekile zikagesi ekudalweni kwama-inductors futhi lichaza ezinye zekhoyili ezivame ukusetshenziswa.
Ukucatshangwa okuyisisekelo kokuqalwa
I-inductor ifana ne-transformer eyinhloko, futhi umsebenzi wobuciko ulingana
kuya kwesibili sesi-transformer (Fig.1). Ngakho-ke, eziningana zezici
of transformers ziyasiza ekuthuthukiseni imihlahlandlela yokuklama coil. Esinye sezici ezibaluleke kakhulu kubaguquli beqiniso ukuthi ukusebenza kahle
kokuhlanganisana phakathi kwe-windings kuyahluka ngokulinganayo kuya esigcawini sebanga eliphakathi kwabo.Ngaphezu kwalokho, okwamanje ku-primary of the transformer, eyandiswa ngenani lokujika okuyisisekelo, lilingana nokukhona kwamanje, okwandiswa yinombolo kokuphenduka okuyisithupha. Ngenxa yalokhu ubudlelwane, kunezimo eziningana okufanele zigcinwe engqondweni uma uklama noma iyiphi i-coil
I-1) Ikhoyili kufanele ihlanganiswe nengxenye ngokusemthethweni njengokwenziwe ngokudluliselwa kwamandla amakhulu. Kuyinto efiselekayo ukuthi inani elikhulu kunazo zonke lemigqa yamagnetic flux ihlukanisa umsebenzi wokusebenza endaweni. I-denser ukuhlunga kuleli phuzu, okuphakeme kuzoba okwamanje okwenziwe engxenyeni.
I-2) Inombolo enkulu kakhulu yemigqa ye-flux engxenyeni ye-solenoid iphakathi nendawo yekhoyili. Imigqa ye-flux igxilile
ngaphakathi kwekhoyili, ukunikeza izinga eliphezulu lokushisa lapho.
I-3) Ngenxa yokuthi ukuqhuma kuningi okugxilwe eduze kwekhoyili kuphenduka futhi kwehla kude nabo, i-geometric centre of the coil yindlela encane yokuhamba. Ngakho-ke, uma ingxenye ingasuswa esikhungweni sekhoyili, indawo eseduzane nekhoyili iphendulela ingasakaza inani elikhulu lemigqa ye-flux futhi ngaleyo ndlela ingashiswa ngesilinganiso esiphezulu, kanti indawo
okuyingxenye yokunciphisa okuncane kungashiswa ngesilinganiso esincane; iphethini eliholayo iboniswa ngokuhlelekile kuFi. 2. Lo mphumela uzwakala ngokwengeziwe ekushiseni okuphezulu kokufakelwa kwamavolumu.